တောင်ကိုရီးယားအသင်းကို အမှားအယွင်းမရှိ အနိုင်ယူခဲတဲ့ မက္ကဆီကို
Mexico21 South Korea
Vela (26' minutes pen), Javier Hernández (66' minutes) FT Son Heung-Min (90'+3 minutes)
နှစ်ပွဲဆက် အနိုင်ယူပြီး ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့် တက်ဖို့အခြေအနေကောင်းသွားတဲ့ မက္ကဆီကို
23 Jun 2018 . 11:37 PM
အဖွင့်ပွဲမှာ လက်ရှိချန်ပီယံ ဂျာမနီကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ မက္ကဆီကိုအသင်းဟာ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပွဲမှာလည်း အမှားအယွင်းမရှိအနိုင်ယူပြီး (၆)မှတ်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်ရောက်ဖို့အခြေအနေကောင်းသွားပါပြီ။ တောင်ကိုရီးယားအသင်းဟာ ဆွီဒင်နဲ့ပွဲကထက် ခြေစွမ်းပိုကောင်းခဲ့ပေမယ့်လည်း အခွင့်အရေးတွေကို အသုံးချနိုင်မှုအပိုင်းမှာ အားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တာကြောင့် ရှုံးပွဲနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ကြိမ်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာလည်း အုပ်စုအဆင့်နဲ့ပဲ ကျေနပ်ခဲ့ရတယ်။
မက္ကဆီကိုအသင်းအနေနဲ့ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ အနေအထားခြင်း ကွာဟပေမယ့်လည်း ပြိုင်ဘက်ကို သတိထားကစားခဲ့ပြီး ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု အသာရဖို့ပဲ ဦးစားပေးခဲ့တယ်။ ပွဲအစပိုင်းမှာ တောင်ကိုရီးယားအသင်း အခွင့်အရေးတစ်ကြိမ်ရခဲ့ပေမယ့် အဓိက ကစားသမား ဆွန်ဟောင်မင် Son Heung-Min လွဲချော်ခဲ့တယ်။
မက္ကဆီကိုအသင်းက လူငယ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမား လိုဇာနို Lozano ရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းကနေ အဓိက တိုက်စစ်ဆင်ကစားခဲ့ပြီး လိုဇာနို ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျရင် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ ကစားဟန်တွေကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ပထမပိုင်း(၂၆)မိနစ်မှာ မက္ကဆီကိုအသင်း အဖွင့်ဂိုးရခဲ့ပြီး တောင်ကိုရီးယားကစားသမားတစ်ဦး ပယ်နယ်တီဧရိယာထဲမှာ လက်ထိဘောဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ပယ်နယ်တီကန်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ အဲဒီပယ်နယ်တီကို တိုက်စစ်မှူး ကားလို့စ်ဗီလာ Carlos Vela က အမှားအယွင်းမရှိကန်သွင်းခဲ့တယ်။ ဆွီဒင်နဲ့ပွဲတုန်းက ပယ်နယ်တီပေးခဲ့ရလို့ ရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယားအသင်း ပယ်နယ်တီကံကြမ္မာဆိုးနဲ့ ထပ်ပြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုရမယ်။
မက္ကဆီကိုအသင်းအတွက် ဒုတိယဂိုးကို (၆၆)မိနစ်မှာ Counter ကနေ အသင်းရဲ့သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမား ဟာနန်ဒက်ဇ် Hernandez က လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘ၀ သွင်းဂိုး(၅၀)မြောက်အဖြစ် သွင်းယူခဲ့တာပါ။ မက္ကဆီကိုအသင်းအနေနဲ့ Normal Play ထက် Counter Attacking Play ကစားပုံက ပိုကောင်းမွန်ပြီး တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင်ရင် အနည်းဆုံး တိုက်စစ်ကစားသမား(၃)ယောက်လောက်က ပြိုင်ဘက်အခြမ်းမှာ ရှိနေတတ်တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဂျာမနီနဲ့ပွဲတုန်းကလည်း အဲဒီပုံစံနဲ့ လက်ရှိချိန်ပီယံကို ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးခဲ့တယ်။ တောင်ကိုရီးယားအသင်းအတွက် ဆွန်ဟောင်မင်က (၉၄)မိနစ်မှာ ချေပဂိုးတစ်ဂိုးပြန်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ဆေးမမီတော့ပါဘူး။
နှဈပှဲဆကျ အနိုငျယူပွီး ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ တကျဖို့အခွအေနကေောငျးသှားတဲ့ မက်ကဆီကို
အဖှငျ့ပှဲမှာ လကျရှိခနျြပီယံ ဂြာမနီကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ မက်ကဆီကိုအသငျးဟာ တောငျကိုရီးယားနဲ့ပှဲမှာလညျး အမှားအယှငျးမရှိအနိုငျယူပွီး (၆)မှတျနဲ့နောကျတဈဆငျ့ကို တကျရောကျဖို့အခွအေနကေောငျးသှားပါပွီ။ တောငျကိုရီးယားအသငျးဟာ ဆှီဒငျနဲ့ပှဲကထကျ ခွစှေမျးပိုကောငျးခဲ့ပမေယျ့လညျး အခှငျ့အရေးတှကေို အသုံးခနြိုငျမှုအပိုငျးမှာ အားနညျးခကျြတှရှေိခဲ့တာကွောငျ့ ရှုံးပှဲနဲ့ရငျဆိုငျခဲ့ရတာဖွဈပွီး ဒီတဈကွိမျကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာလညျး အုပျစုအဆငျ့နဲ့ပဲ ကနြေပျခဲ့ရတယျ။
မက်ကဆီကိုအသငျးအနနေဲ့ တောငျကိုရီးယားနဲ့ အနအေထားခွငျး ကှာဟပမေယျ့လညျး ပွိုငျဘကျကို သတိထားကစားခဲ့ပွီး ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှု အသာရဖို့ပဲ ဦးစားပေးခဲ့တယျ။ ပှဲအစပိုငျးမှာ တောငျကိုရီးယားအသငျး အခှငျ့အရေးတဈကွိမျရခဲ့ပမေယျ့ အဓိက ကစားသမား ဆှနျဟောငျမငျ Son Heung-Min လှဲခြျောခဲ့တယျ။
မက်ကဆီကိုအသငျးက လူငယျကွယျပှငျ့ကစားသမား လိုဇာနို Lozano ရဲ့ ဘယျဘကျအခွမျးကနေ အဓိက တိုကျစဈဆငျကစားခဲ့ပွီး လိုဇာနို ခွစှေမျးပွနိုငျခဲ့ပမေယျ့ တဈခါတဈလကေရြငျ တဈကိုယျကောငျးဆနျတဲ့ ကစားဟနျတှကေိုလညျး တှခေဲ့ရတယျ။ ပထမပိုငျး(၂၆)မိနဈမှာ မက်ကဆီကိုအသငျး အဖှငျ့ဂိုးရခဲ့ပွီး တောငျကိုရီးယားကစားသမားတဈဦး ပယျနယျတီဧရိယာထဲမှာ လကျထိဘောဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ ပယျနယျတီကနျခှငျ့ရခဲ့တယျ။ အဲဒီပယျနယျတီကို တိုကျစဈမှူး ကားလို့ဈဗီလာ Carlos Vela က အမှားအယှငျးမရှိကနျသှငျးခဲ့တယျ။ ဆှီဒငျနဲ့ပှဲတုနျးက ပယျနယျတီပေးခဲ့ရလို့ ရှုံးပှဲတှခေဲ့တဲ့ တောငျကိုရီးယားအသငျး ပယျနယျတီကံကွမ်မာဆိုးနဲ့ ထပျပွီးရငျဆိုငျခဲ့ရတယျလို့ ဆိုရမယျ။
မက်ကဆီကိုအသငျးအတှကျ ဒုတိယဂိုးကို (၆၆)မိနဈမှာ Counter ကနေ အသငျးရဲ့သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမား ဟာနနျဒကျဇျ Hernandez က လကျရှေးစငျကစားသမားဘ၀ သှငျးဂိုး(၅၀)မွောကျအဖွဈ သှငျးယူခဲ့တာပါ။ မက်ကဆီကိုအသငျးအနနေဲ့ Normal Play ထကျ Counter Attacking Play ကစားပုံက ပိုကောငျးမှနျပွီး တနျပွနျတိုကျစဈဆငျရငျ အနညျးဆုံး တိုကျစဈကစားသမား(၃)ယောကျလောကျက ပွိုငျဘကျအခွမျးမှာ ရှိနတေတျတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဂြာမနီနဲ့ပှဲတုနျးကလညျး အဲဒီပုံစံနဲ့ လကျရှိခြိနျပီယံကို ကောငျးကောငျးဒုက်ခပေးခဲ့တယျ။ တောငျကိုရီးယားအသငျးအတှကျ ဆှနျဟောငျမငျက (၉၄)မိနဈမှာ ခပြေဂိုးတဈဂိုးပွနျသှငျးခဲ့ပမေယျ့ ဆေးမမီတော့ပါဘူး။
by Naing Linn . 41 mins ago